Electric Scooter Factory - Isitolo esidayisa yonke impahla Scooter Electric Abakhiqizi, abahlinzeki
Ibhethri le-EcoReco likhokhiswa kusengaphambili lifike ku-50% ngaphandle kwebhokisi ukuze kube lula kuwe ukuze ukwazi ukuligibela khona manjalo.
Sebenzisa ishaja ye-EcoReco ukushaja kabusha ibhethri lapho ibhethri elifunda kudeshibhodi liphansi. Indawo esebenza kahle kakhulu ukukhokhisa iphakathi kwamabha ayi-1-4. Amabhethri e-LiFePO4 awanamphumela wememori.
Lindela ukuthi ibhethri lizokhokhisa kusuka kokungenalutho kuye kokungu-80% emahoreni ama-2 (kunconyiwe) noma kusuka ekungenalutho kuya kokugcwele emahoreni angu-4.5.
1. Qinisekisa ukuthi isithuthuthu sicishiwe, bese uvula ikepisi lokuphela ngaphezulu kwesokhethi lokushaja eliseduze ne-kickstand.
2. Xhuma ipulaki yeshaja eyisiyingi kusokhethi yokushaja isikuta, bese uxhuma ishaja engu-3 prong plug esitolo esidayisa ugesi.
3. Ibhethri liyashaja lapho ishaja i-LED ibomvu. Ishaja ye-LED iba luhlaza uma igcwele ngama-85%. Ungaqhubeka ukhokhise isithuthuthu bese usikhipha ngaphezulu ngamahora angama-1-2 uma kudingeka. Ukumisa ukushaja, sicela ususe
ipulagi engu-3 prong esitsheni sikagesi, bese ususa ipulaki eyisiyingi kusokhethi yokushaja yesikuta. Vala ikepisi lokugcina.
1. Isikuta sikagesi silethwa sihlanganiswe ngokugcwele kusuka kumenzi.
2. Ibhethri likhokhiswe kusengaphambili kube ngu-50% ngaphandle kwebhokisi ukuze kube lula kuwe.
3. Isikuta sikagesi sihamba ngokuhlolwa okuningana nemijikelezo yokushaja efektri ngenhloso yokuqinisekisa ikhwalithi. Ideshibhodi ingahle ibonise imijikelezo embalwa yokushaja namamayela agibele ngosuku lokutholwa.